Nagu saabsan - Soo-dejinta Soo-dejinta & Dhoofinta Co., Ltd.
Baaruud Black BR
Baaruud Black B
Baaruud Black BR ​​Liquid
Furashada Soo Dejinta & Dhoofinta Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2004. Shirkadeenu waxay heshay ISO 9001: 2006 iyo ISO 14000. Waxaan ururinay khibrad hodan ah oo loogu talagalay dhoofinta alaabada kiimikada wanaagsan ee Shiinaha. Iyada oo ku saleysan warshaddeenna xoogga badan, waxaan awoodnaa inaan ku taageerno baaruud Black iyo dhexdhexaadiyaasheeda suuqa dibedda.
Shirkaddayadu waxay fiiro gaar ah u leedahay tababarka shaqaalaha, shaqaalaha ganacsiga ee xirfad u leh hawlgalka noocyada kala duwan ee alaabada kiimikada ee dhoofinta ganacsiga. Waxaan ku siinnaa alaab iyo adeeg tayo sare leh waqtigii loogu talagalay macaamiisheenna. Shirkaddu waxay rajeyneysaa inay horumar ka raadsato saaxiibadeed dibedda iyo gudaha oo ku saleysan iskaashi caddaalad ah iyo faa'iidooyin wadaag ah. Waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa hababka ganacsiga caalamiga ah, oo u hoggaansamey qandaraasyada, ilaalinaa ballanqaadka, adeegga tayada leh, waxtarka labada dhinac iyo faaiidada ganacsiga, iyo ganacsiga, warshadaha, waaxda maaliyaddu waxay sameysay xiriir iskaashi oo ballaaran, iyadoo loo marayo xiriirka dhow ee ganacsiga ee Shiinaha suuqa caalamiga. Shirkaddayadu waxay dooneysaa inay horumar ka raadsato saaxiibadeed dibedda iyo gudaha oo ku saleysan iskaashi caddaalad ah iyo faa'iidooyin wadaag ah.
FORING waa takhasus dhoofinta alaabada kiimikada ganaax ee Shiinaha. Warshaddeenu waxay leedahay qaab farsamo sare oo ay ku soo saarto Sulfur Black B, Sulfur Black BR, 2,4-Dinitrochlorobenzene iyo 2-Amino-4-nitrophenol. Bedka dhirta waa 7000 mitir murabac oo leh baaruud madow oo soo saar sanadle ah oo qiyaastii ah 10,000 tan sanadkii. Waxay leedahay maalgashi guud 36 milyan oo doolar iyo in ka badan 300 oo shaqaale ah.
Natiijada badeecadeena tayada sare leh iyo macaamiilkeenna heer sare ah, waxaan ka helnay shabakad iib ah oo caalami ah oo gaareysa Singapore, Pakistan, Vietnam, India iyo dalal badan oo Yurub ah
Telefoon ： 0086-13603111583
Emayl ： tianyang@foringfor.com
Cinwaanka ： 1211 ShangDe Plaza, No.8 Kangle Street, Shijiazhuang, Shiinaha
waad nala soo xiriiri kartaa heer